Isniin, February 1, 2021 Axad, Febraayo 7, 2021 Douglas Karr
Waxaa jiray maqaallo badan oo ku saabsan safaradii iibsadaha ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyo sida ganacsiyada ay ugu baahan yihiin inay si dijitaal ah u beddelaan si ay ula qabsadaan isbeddelada ku dhaca hab-dhaqanka iibsadaha. Wejiyada uu iibsade ku dhex marayo waa arrin muhiim u ah guud ahaan iibkaaga iyo istaraatiijiyada suuqgeynta si loo hubiyo inaad siineyso macluumaadka rajada ama macaamiisha meesha iyo goorta ay raadinayaan. Cusboonaysiinta 'Gartner's CSO', waxay ku qabtaan shaqo aad u wanaagsan qaybinta
Isbedelka Dijital ah: Marka CMOs iyo CIOs ay wada shaqeeyaan, qof kastaa wuu guuleystaa
Arbacada, Janaayo 20, 2021 Arbacada, Janaayo 20, 2021 Bonnie Crater
Isbadalka dhijitaalka ah ayaa la dedejiyay sanadka 2020 maxaa yeelay waxay ahayd inuu sameeyo. Faafida wuxuu ka dhigay baratakoolka kala fogaynta bulshada mid lama huraan ah oo dib u soo nooleeyay baaritaanka wax soo saarka internetka iyo iibsashada ganacsiyada iyo macaamiisha si isku mid ah. Shirkadaha aan horey uheyn joogitaanka dhijitaalka ah ee adag waxaa lagu qasbay inay si dhakhso leh u horumariyaan, hogaamiyaasha ganacsiguna waxay udhaqaaqeen inay ka faa'iideystaan ​​durdurka xogta isdhaxgalka dijitaalka ee la abuuray. Tani waxay run ka ahayd B2B iyo B2C space: Faafka waxaa laga yaabaa inuu leeyahay khariidado isbeddel dijitaal ah oo deg deg loo soo gudbiyey
Shan isbeddellada Suuqgeynta CMOs waa inay ku dhaqmaan 2020
Talaado, Disembar 17, 2019 Talaado, Disembar 17, 2019 Jay Atcheson
Maxay Guusha ugu tiirsan tahay istiraatiijiyad weerar ah. In kasta oo miisaaniyadihii suuqgeynta ay yaraadeen, CMOs wali waxay ku rajo weyn yihiin awooddooda si ay u gaaraan yoolalka ay higsanayaan 2020 marka loo eego Gartner sanadlaha ah ee 2019-2020 CMO Spend Survey. Laakiin yididiilo aan ficil lahayn waa mid aan faa'iido lahayn oo CMO badan ayaa laga yaabaa inay ku fashilmaan inay qorsheeyaan waqtiyada adag ee soo socda. CMOs way ka dhaqso badan yihiin hadda sidii ay ahaayeen xilligii dhaqaalihi ugu dambeeyay ee dhaqaalaha, laakiin taasi micnaheedu maahan inay hoos u foorari karaan si ay ula baxaan tartan adag
Khuraafaadka DMP ee Suuqgeynta
Monday, July 11, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 George Corugedo
Nidaamyada Maareynta Macluumaadka (DMPs) ayaa goobta yimid dhowr sano ka hor dad badana waxay u arkaan badbaadiye suuqgeyn. Halkan, waxay yiraahdaan, waxaan ku heli karnaa "diiwaanka dahabiga ah" macaamiisheenna. DMP-ka, iibiyeyaashu waxay ballanqaadayaan inaad ururin karto dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u aragto 360-darajo oo macaamiisha ah. Dhibaatada kaliya - run maahan. Gartner wuxuu qeexayaa DMP inuu yahay softiweer kaqaba xogta ilo badan
3 Sababtoo ah Kooxaha Iibinta ayaa ku Fashilma Falanqeyn la'aan
Isniin, Maarso 28, 2016 Michael Schultz
Sawirka soojireenka ah ee iibiyaha guuleystaha ah waa qof taga (oo laga yaabo inuu la socdo fedora iyo shandad), oo ku hubaysan soo jiidasho, qancin, iyo aaminaad waxa ay iibinayaan. In kasta oo aaminaadda iyo soo jiidashada ay dhab ahaantii door ka ciyaaraan iibka maanta, falanqaynta ayaa u soo baxday inay tahay aaladda ugu muhiimsan ee ku jirta sanduuqa koox kasta oo iibisa. Xogtu waa udub dhexaadka habka iibka casriga ah. In sida ugu badan looga faa’iideysto xogta macnaheedu waa soo saarida fikradaha saxda ah
Waa maxay internetka waxyaabaha? Maxay uga dhigan tahay Suuqgeynta?
Talaado, Maarso 3, 2015 Jimco, Nofeembar 17, 2017 Douglas Karr
Isku xirnaanta internetka ayaa run u noqonaysa qalab kasta. Tani waxay door weyn ka ciyaari doontaa xogta weyn iyo suuqgeynta mustaqbalka dhow. Gartner wuxuu saadaaliyay in sanadka 2020 ay jiri doonaan in ka badan 26 bilyan oo aalado ku xiran internetka. ] = [op0-9y6q1 Waa maxay Internetka Waxyaabaha Waxyaabaha loola jeedaa waxyaalaha aynaan caadi ahaan qiyaasi karin inay isku xidhan yihiin. Waxyaabaha waxay noqon karaan guryo, qalab, qalab, gawaari, ama xitaa dad. Dadku way
Mustaqbalka Utopia ee Iibinta Kanaalka
Monday, August 4, 2014 Monday, August 4, 2014 Dana Drissel
Wada-hawlgalayaasha kanaalka iyo kuwa iibiya Qiimaha (VARs) waa ilmo-dhaleen madax-cas ah (oo aan loola dhaqmin iyada oo aan loo eegin dhalashada) marka ay timaado helitaanka dareenka iyo ilaha ka imanaya soo-saareyaasha alaabada aan tirada lahayn ee ay iibiyaan. Iyagu waa kuwa ugu dambeeya ee hela tababarka iyo kuwa ugu horreeya ee lagula xisaabtamo inay la kulmaan kootadooda. Iyada oo miisaaniyada suuqgeynta xadidan, iyo aaladaha iibka ee duugoobay, waxay la halgamayaan inay si wax ku ool ah ula xiriiraan sababta ay alaabtu u tahay mid gaar ah oo ka duwan. Waa maxay Iibka Channel? Hab
Saadaalinta Gartner ee Top 10 Technologies ee 2011
Khamiista, Diseembar 9, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa akhrin xiiso leh Saadaasha Gartner ee 10ka teknoolojiyad ee ugu sarreeya 2011 for iyo sida ku dhowaad saadaal kasta ay saameyn ugu leedahay suuq geynta dijitaalka. Xitaa horumarka ku saabsan keydinta iyo qalabka ayaa saameyn ku yeelanaya awoodaha shirkadaha si ay ula falgalaan ama ula wadaagaan macluumaadka macaamiisha iyo rajooyinka si deg deg ah oo waxtar leh. Top Ten Technologies for 2011 Computing Cloud - Adeegyada xisaabinta daruuraha ayaa jira iyadoo laga dhex helayo muuqaalka dadweynaha furan iyo kuwa gaarka loo xiray. Saddexda sano ee soo socota ayaa la arki doonaa bixinta